On the table zemikhosi, ikakhulukazi koNyaka Omusha, senza Sekuyisikhathi eside ejwayele uhla ethile njalo salads: inhlanzi ngaphansi ijazi noboya . Olivier nabanye, kodwa angasebenzi amaningi anquma ukukuvala ehlukahlukene izitsha, ukushintsha isimo sabo, ukubukeka. Futhi kwakukhona isaladi "Santa Claus", okungase yimiphi nalezi okukhulunywe ngazo ngenhla, kodwa ngesikhathi esifanayo, uhlobo Russian Santa Claus. Manje sihlaziya ezinye izindlela ezithakazelisayo kakhulu izitsha ezinjalo.
Recipe loNyaka Omusha "Santa Isigaba". Base - Olivier
Ukuze wenze lokho, kudingeka mikhiqizo: 200 amagremu kaHamu, 200 amagremu inkukhu webele, okufanayo - amakhowe, imayonnaise, amagremu 100 of ushizi, ukhukhamba ezimbili. Izithako ngokokuhlobisa: iso - iminqumo black, ngoba izigqoko - beet ogayiwe njengenhlangano entry for izigqoko, izilevu kanye ebusweni - amaqanda yashizi abilisiwe, Nose - isigamu utamatisi noma beetroot slide. Manje ukuqoqa Salad "Santa Claus". Oku-ukulungiselela izingxenye. Bilisa webele inkukhu futhi sibe yimichilo mncane. Futhi kuphundla amakhowe lisikiwe futhi Fry kwabo amafutha yemifino, ke selehlile. Ngokufanayo lisikiwe ukhukhamba kanye ham, deda on a grater ushizi esihle. Siqala ipuleti flat ukusakaza zamatshe ulethisi, smearing imayonnaise ngalinye. ungqimba Okokuqala - hen, kwesibili - amakhowe, eyesithathu - ukhukhamba, sesine - ham, yesihlanu - ushizi. Futhi ekugcineni ukuhlobisa isidlo esiphelele izithako abafanele.
Salad "Santa Claus" ngesisekelo Herring begqoke
Uhlu imikhiqizo edingekayo: amazambane Five, 500 g herring nezibopho, omunye onion, izaqathe ezintathu, beet ezimbili kanye imayonnaise. Sinikeza iresiphi yasekuqaleni ekuwulungiseleleni. Okokuqala sithatha emjovweni esithengisa amaswidi, bayilungisa, bese udweba phezu ipuleti nentaba enkulu, okwenza dill isihlahla sikaKhisimusi. Kusolwa ukuthi beet, izaqathe kanye namazambane - isivele okuphekiwe. Ukwenza ungqimba wokuqala amazambane yashizi, kwesibili - herring, Diced, eyesithathu - ka anyanisi oqotshiwe. Athambisa imayonnaise. Okulandelayo wabeka izaqathe, vukuza on a grater emihle, spoon cabaza. ungqimba Landelayo - beetroot, njengoba wagcoba on a grater emihle, ke imayonnaise. Siqala zokuhlobisa isaladi yethu "Santa Claus". Ngesikhathi isidlo esiphelele sithola kuhlaka bese ugcwalisa iphethini. Ushizi, ukusika ingilazi, okwenza ubuso, basihlikihle on a grater encane iqanda omhlophe nesilevu. Hlikihla zamaqanda kanye izaqathe. Ukudala ijazi wekucala, wesibili - isikhwama amagilavu. Isigaba sokugcina: waphinda udonsa nentaba kanye nabasebenzi ukwenza beetroot nomnqumo - amashiya namehlo.
"Santa Claus" ne pepper, iminqumo cherry utamatisi
Uhlu imikhiqizo edingekayo: 200 amagremu kaHamu, okufanayo - amakhowe futhi inkukhu abilisiwe, amagremu 100 of ushizi, ukhukhamba ezimbili, i-paprika, imayonnaise, izici iminqumo emibili, amaqanda amane, omunye cherry utamatisi. We bakutshele indlela usengayenza i isaladi yasekuqaleni "Santa Claus". Indlela Yokuthola nakwesilandelayo. Isinyathelo sokuqala, njengoba ngaso sonke isikhathi, ukulungiselela. Sika ibe izicezu inkukhu fillet, ikhukhamba kanye ham, amakhowe - izingcezu ezincane bese Fry kwabo ku inhlawulo grater deda ushizi. Khona-ke, ifomu ekhethekile, okuyinto ine uhlobo lwekhanda Santa Claus, izingqimba ukusakaza isaladi yethu. Ngamunye wabo, ngesikhathi esifanayo, coat ne imayonnaise. I-oda izingqimba simiswe ngalendlela lelandzelako: inkukhu, amakhowe, kulandele ikhukhamba kanye ham. Wokugcina - ushizi. Hlobisa isaladi. Bilisa amaqanda zihlukanise obubaveza izikhupha. Ngolibo ukwenza ofeleba onqenqemeni nesilevu, ezisukela enkulungwaneni yesibili - ubuso. Beka cap uqobo kusukela pepper isiBulgaria, ngaphambili kutsho in a blender kanye agxishiwe. Ikhala - utamatisi amehlo - iminqumo. Lokho konke.
Omunye iresiphi efanayo kakhulu
Little ezihlukahlukene isaladi odlule "Santa Claus". Photo of the dish esiphelele kuyosisiza ukuba siyiqonde le umehluko. Izithako: inkukhu eyodwa webele, amaqanda emihlanu inkukhu, 300 amagremu of amakhowe, pepper ezimbili Bulgarian, ezintathu zomnqumo, dill, amafutha sunflower, imayonnaise nosawoti. Bilisa amaqanda, ukwehlukanisa amaprotheni kusukela isikhuphasha kanye ezintathu on a grater emihle. Amakhowe, paprika ngibhema inkukhu webele Imi zibe yizicucu phakathi nendawo, bese amakhowe ku sunflower oil gazinga. Lubricating imayonnaise kusendlalelo ngasinye obumba isaladi. Siqala isifuba siqhubeke pepper, amakhowe futhi awuqede isikhuphasha kanye albumen. Siyaqhubeka yokuthi inkukhu nakha lolo isihlibhi, amakhowe - izinyamazane, upelepele obomvu kanye amaprotheni - Santa Claus futhi Christmas izihlahla - dill. Umphumela isithombe real ukuthi ngisho ukudla into edabukisayo.
Recipe "Santa Claus" amazambane kanye nenyama
Sidinga: iyiphi inyama abilisiwe - 200 amagremu, abilisiwe amazambane amabili, eyodwa isanqante kanye amaqanda emihlanu, obomvu bell pepper, umnqumo, omunye omnyama imayonnaise. Sika inyama zibe cubes amancane kumenza ungqimba wokuqala ulethisi yethu. Amazambane omahhadlahhadla grater Ngokwesilinganiso, ukusabalala therefrom ungqimba yesibili futhi athambisa imayonnaise. Njengoba ungqimba sesithathu usebenzisa isanqante, futhi yashizi on grater ophansi. Sauce. Of izikhupha ogayiwe ukwenza ubuso, futhi upelepele obomvu, Diced - headgear. Ngomqondo onabile, kukhona iresiphi isaladi ngoba "Santa Claus Hat" njengendlela dish ehlukile, kodwa sizobe nilishiye libe esinye isihloko. Njengoba isisekelo salo namanje iminqumo efanayo. Noma ozithandayo Egqoke Herring. amaprotheni Of ogayiwe musa okuqoqiwe isigqoko nesilevu, umnqumo - amehlo, ikhala kuphetha kusuka ucezu upelepele obomvu.
"Santa Claus" nge-salmon
Imikhiqizo: amaqanda amane abilisiwe, ummbila okusemathinini - omunye uthi lokubeka imbiza, anyanisi ababili, omunye utamatisi, omunye isanqante, imayonnaise amafutha zemifino. Oh, futhi omunye isaladi ngaphezulu "Santa Claus". Sula amaqanda, ukwehlukanisa izikhupha kusukela abamhlophe, bese basihlikihle on a grater emihle ngokwehlukile. Salmon ukuhlukana zibe izingxenye ezimbili, enye yazo uthathe cubes, elinye - tincetu mncane. Cubes - utamatisi. Hlanza izaqathe kanye anyanisi, okokuqala - deda on a grater, elikhulu, fake usike yesibili. Fry ndawonye emafutheni zemifino. Likhanyelwe kusukela izimbiza corn uketshezi ahlangana olulodwa esitsheni utamatisi, izaqathe, u-anyanisi, izinhlanzi ama-salmon, Diced, ummbila, amaqanda izikhupha. Khona - imayonnaise, uhlanganise kahle futhi basakaze ngoqwembe esikhulu. Ngo inqubo obumba ukuma Santa Claus iholide. Hlobisa kokuqendwa isaladi salmon tincetu, amaphrotheni, pepper noshizi. Shiya imizuzu engu-30 kuya impregnate futhi ungaletha etafuleni. Ujabulele ukudla kwakho.
Salad nge uphizi oluhlaza